Daddy's Wild Oats - Webtoon Korean Manhwa - Manhua - Manga and Light Novel ကိုအွန်လိုင်းတွင်အခမဲ့ဖတ်ပါ။
ဖေဖေရဲ့တောရိုင်း Oats ပျမ်းမျှ4/5ထဲက 1
N / A, 3.3K အမြင်များရှိသည်
Won-yeong သည်မိသားစုဘဝကိုဖိအားပေးနေသည်။ အလုပ်လက်မဲ့သစ်များ၊ ဇနီးသည်နှင့်ကလေးသုံးယောက်နှင့်အတူထောက်ပံ့ရန်အတွက်ငွေတောင်းခံလွှာများဆက်လက်ရှိနေသည်။ ပိုဆိုးတာကသူဟာတစ်နှစ်ကျော်လောက်ကိုမချိန်းထားသေးဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းပြောပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, တစ် ဦး တည်းသောစားသုံးသူအဖြစ်သူသည်မိမိအတွေးအခေါ်များကိုအမြတ်ထုတ်ရန်နှင့်တတ်နိုင်သမျှငွေရှာရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ သငျသညျလှပတောက်ပပြီးနှစ်သက်သောစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါ, အလုပ်ရုံသင်၏ရင်ခွင်၌လဲကျသင့်တယ်,!? ကံကောင်းထောက်မစွာ Won-yeong အတွက်, ဟောင်းအသိအကျွမ်းအသစ်ပေါ်လာသူငြင်းဆန်လို့မရပါဘူးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုမတိုင်မီမကြာမီ။ ထိုအရည်အချင်းကိုကောင်းစွာအသုံးချရန်နှင့်ထို pent-up စိတ်ဖိစီးမှုအချို့ကိုသက်သာစေရန်အချိန်!
အခန်းကြီး 50 စက်တင်ဘာလ 15, 2021
အခန်းကြီး 49 စက်တင်ဘာလ 8, 2021
အခန်းကြီး 48 စက်တင်ဘာလ 1, 2021